Dell 19.5V (4.62A) Adapter (Original) big
Dell မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product လေးဖြစ်ပြီးတော့ (OVP: Over Voltage output Protection. OCP: Over Current output Protection. SCP: Short Circuit output Protection) ပါဝင်တဲ့ Adapter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Dell မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Laptop တွေဖြစ်တဲ့ Dell Inspiron I14RN-1227BK Dell Inspiron I14RN-1364DBK Dell Inspiron I14RN-1364PBL Dell Inspiron I14RN-1365DBK Dell Inspiron I14RN-1593BK Dell Inspiron i14RN-1593DBK Dell Inspiron I14RN-1817DBK Dell Inspiron i14RN-1818DBK Dell Inspiron I14RN4110-7616DBK Dell Inspiron I14RN4110-7616FIR Dell Inspiron I14RN4110-7616PBL Dell Inspiron I14RN4110-8073DBK Dell Inspiron I14RN Dell Inspiron I14Z-1424BK Dell Inspiron I14Z-2877BK Dell Inspiron I14Z-6679DBK Dell Inspiron I14Z Dell Inspiron I1545-3232OBK စတဲ့ Laptop တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Dell 19.5V (3.34A) Adapter With Cable (Big) (Original)
Dell ရဲ့ 3.34 A output ရှိပြီး Cable ပါဝင်တဲ့ product လေးဖြစ်ပါတယ်။ Original ကြိုးဖြစ်သည့်အတွက် ပိုပြီးစိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ LED indicator ပါဝင်သောကြောင့် မီးရောင်မှိန်နေရင်တောင် ရှာလို့လွယ်ကူစေမှာပါ။ နေရာချွေတာနိုင်ပြီး ချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူအောင်လည်း စနစ်တကျ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ Inspiron 17R 5737, 3458, 3737 အတွက် သင့်တော်တဲ့ Adapter လေးဖြစ်ပါတယ်။
Dell 19.5V 3.34A Adapter (Small)
Dell မှထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product လေးဖြစ်ပြီးတော့ (OVP: Over Voltage output Protection. OCP: Over Current output Protection. SCP: Short Circuit output Protection) ပါဝင်တဲ့ Adapter လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Dell 19.5V-4.62A (4.5-3.0) Original Adapter
Sanger SLB-10a Battery
Sanger SLB-10a Battery သည် အရည်အသွေး စိတ်ချရပီး အသုံးပြုသူ စိတ်ကျေနပ်စေမည့် Battery အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ Output 3.7 V နှင့် Capacity 1050 mAh ဖြစ်ပါသည်။
Dell 19.5V 4.62A Big Adapter
Dell 19.5V 4.62A Adapter Big တွင် Power အားဖြင့် 90W ပါရှိပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းပြီး စိတ်ချရသောDell Adapter လေးကို ရွေးချယ်သင့်တယ်ခင်ဗျ။
Dell XPS 13-9300 (i5-10th Gen,Silver)
Dell XPS 13 9300 Laptop သည် Intel core i5-10th Processor ကိုအသုံးပြုပေးထား ပြီး DDR4 8GB RAM နှင့် SSD 512GB တို့ကိုထည့် သွင်း အသုံးပြုပေးထားပါသည်။ အလူမီနီယံ ကိုယ်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးထားသည့်အတွက် ပိုမို၍ခိုင်မာသောအရည်အသွေးမြင့် ဒီဇိုင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အရွယ်အစား 13.4 လက်မသာရှိပြီး နောက်ဆုံးပေါ် Corning Gorilla Glass6ကိုသုံးပေးထားတာကြောင့် ခိုင်ခံ့သည်သာမက ထိရောက်မှုနှင့်ခြစ်ရာခုခံမှုလည်းရှိသည်။ Elevated essentials display, keys နှင့် touchpad လို element တွေကို ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် အသုံးပြုသူတို့ အကြိုက်တွေ့ နှစ်သက်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
Dell 19.5V 4.62A Adapter ( 1.7)
Dell 19.5V (4.62A) Adapter Small (N) သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်စိတ်ချယုံကြည်ရသော Laptop Adapter လေးဘဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် Input voltage 100-240 နှင့် Output voltage 19.5V 4.62 ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် Overload, Overvoltage ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Dell Inspiron 3280 i5 All In One
Dell Inspiron 3280 i5 All In One Branded သည် Intel Core i5 8th generation Processor ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး တောက်ပကာတွန်းများမှမှောင်မိုက်ဆုံးသော Movieများအထိ Full HD မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး ကျဉ်းမြောင်းသော bezel ဘောင်များရှိသည်။ အသံတိုင်းကိုရှင်းလင်းစေခြင်းဖြင့် စတူဒီယိုအရည်အသွေးရှိသောအသံကို သင်ခံစားနိုင်သည်။ HI-FI WIFI - 802.11 AC ကြိုးမဲ့နည်းပညာကြောင့်အိမ်မည်သည့်နေရာမှမဆိုကြိုးကြိုးမလိုဘဲယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုခံစားနိုင်ပါသည်။
Dell V3888 i5-10th Branded
Dell V3888 Branded သည်Intel Core i5-10thProcessor ကို အသုံးပြုထားပြီး Memory အနေဖြင့် 4GB နှင့် Storage 1TB ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်သော တည်ဆောက်မှုအပိုင်းတို့ကြောင့် အသုံးပြုသူများ ကြိုက်နှစ်သက်စေပါသည်။နောက်ဆုံးပေါ် လေဝင်လေထွက်စနစ်ကိုအသုံးပြုပေးထားသည့်အတွက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ အေးမြစေပါသည်။
Dell 19.5V 3.34A Ori Adapter Small
Dell 19.5V 3.34A Ori Adapter Small လေးသည် Originalဖြစ်သည့်အတွက် အသုံးပြုရာတွင် အရည်အသွေးမှာစိတ်ချရပါသည်။Power Output 90Wဖြစ်ပြီး Input 100V-240V,1.5A နှင့်Frequency 50-60Hz လေးပဲဖြစ်ပါသည်။
Dell Adapter 19.5V (4.62A) small
Dell Adapter 19.5V (4.62A) small လေးသည် Originalဖြစ်သည့်အတွက် အသုံးပြုရာတွင်အရည်အသွေးမှာစိတ်ချရပါသည်။Input 100V-240V,1.5Aနှင့် Frequency 50-60Hzလေးပါရှိပါသည်။Overloadဖြစ်ခြင်းနှင့် Overvoltage ဖြစ်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Dell 19.5V-2.31A(4.5-3.0)Adapter သည်ခိုင်ခံ့ပြီးစိတ်ချရသောပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပ့သည်။Input Voltage 100-240V 50-60Hz 1.5Aနှင့် Output Voltage 19.5V ပဲဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးရှိသော Laptop Adapter ပဲဖြစ်ပါသည်။
Dell Inspiron 3501 (i3-11th,Blue)
Dell Inspiron 3501 i3 11th လေးမှာတော့ Intel Core i3-1115G4 Processor ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားပြီး Ram 4GB နှင့် 256GB SSD တို့ပါဝင်တာကြောင့် ပေါ့ပါးသွက်လက်ပြီး အသုံးပြုရ အဆင်‌ပြေစေပါတယ်။ Intel UHD Graphics သုံးပေးထားပြီး Windows 10 နဲ့ လာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Acemic DV-100L Wireless Camera Microphone System
Acemic DV-100L Wireless Camera Microphone System သည် ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီး 600-928MHz frequency range ထိပေးထားသောကြောင့် ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
Dell Vostro V3681 (i3 10th 4GB 1TB Win10)Branded
Dell Vostro V3681 သည် intel core i3 10 generations processorကိုအသုံးပြုထားပါသည်။4GB DDR4 နှင့် HDD 1TB ကိုထည့်သွင်းပေးထားသည့်အတွက်ရုံးသုံးအတွက်သာမက performance လည်းအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
Asus Vivobook S533EA-BQ059T(i7-11th,8GB,512GB SSD)
Asus Vivobook S533EA-BQ059T သည် processor intel core i7 11th generations ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ Screen size 15.6 inches ရှိပြီး Full HD resolutions ပါဝင်ပါသည်။ memory 8GB DDR4 ကိုအသုံးပြုထားပြီး SSD 512GB ဖြစ်သောကြောင့် performance မြင့်သော softwareများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မည့် laptopလေးဖြစ်ပါသည်။
Dell 19.5V 3.34A adapter big (5.0)
Dell 19.5V 3.34A adapter big လေးသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ချရတဲ့အတွက်အသုံးပြုရာတွင် အဆင်ပြေစေမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Hoco DC28 Micro Charger
Hoco DC28 Micro Charger လေးသည် ABS + PC နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ Input : AC100-240V 50/60Hz 0.4A နှင့် Output USB1+2 : DC5V/5.0A Max ပါဝင်ပါသည်။
Dell 19.5V-3.34A Adapter(Big)
Dell 19.5V-3.34A Adapter လေးသည် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအားဖြင့် 7.4mm x 5.0mm ဖြစ်ပြီး Input: 100 to 240V AC, 50 to 60Hz နဲ့ Output: 19.5V 3.34A, 65W ပါရှိသောကြောင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေ‌သော ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Dell Inspiron 3501 (i3,11th,White)
Dell Inspiron 3501 သည် processor i3 11 gen ဖြစ်ပြီး Display size 15.6 Inches ရှိတာကြောင့် လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှု နှင့်အတူ ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။4GB DDR4 ram နှင့် SSD 256GB ဖြစ်သောကြောင့် ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hoco DW02 Headphone
နားကြပ်များကို bluetooth မှတစ်ဆင့် နှင့် 3.5 aux jack မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ MP3 လုပ်ဆောင်ချက်၊ microSD မန်မိုရီကတ်အတွက် ပံ့ပိုးမှု (နားကြပ်ကို mp3 ပလေယာအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်စွမ်း) ကျစ်လျစ်မှု။ နားကြပ်များကို ခေါက်ထားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မြင့်မားသောအသံအရည်အသွေး ဂီတကို4နာရီအထိဖွင့်နိုင်သည်။ မိုက်ခရိုဖုန်းရှိနေခြင်းက ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဘက်စုံသုံး ခလုတ်များသည် သင့်အား ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ဖြေကြားရန် သို့မဟုတ် အဆုံးသတ်ရန်၊ တေးဂီတဖွင့်ရန်၊ တေးဂီတ၏ အသံအတိုးအကျယ်ကို ပြောင်းလဲရန်၊ အသံကို ခေတ္တရပ်ရန်၊ သီချင်းများကို ပြောင်းရန် ခွင့်ပြုသည်။ ကျစ်လစ်သောနှင့် ergonomic ဒီဇိုင်း ကောင်းမွန်သော ပြန်ဖွင့်အရည်အသွေးသည် သင့်အား လှပသောတေးဂီတကို ခံစားနိုင်စေပါသည်။ တပ်ဆင်ထားသော မိုက်ခရိုဖုန်းသည် သင့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ချိန်တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားပေးနိုင်သည်။
Crome CM-50 Wireless Mouse
mouse padမပါပဲချောမွေ့စွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းပုံစံကြောင့် လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Windows XP/ 2000/ NT/ Vista/ 7/ 8/ 10, Mac နှင့်ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Dell Inspiron 3510(Celeron N4020,4GB,1TB)
Dell Inspiron 3510 မှာတော့ Screen Size 15.6 inches ရှိပြီး CPU Celeron N4020 ကို သုံးပေးထားတာကြောင့် ရုံးသုံး/စာစီစာရိုက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသုံးပြုချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။Display Resolution 1366 x 768 pixels ရှိပြီး Memory DDR4 4GB / Storage ပိုင်းအနေနဲ့ HDD 1TB နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 11 OS ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး 3-Cell, 42 Whr, Integrated battery နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Dell Inspiron 3511(i3-11th)Black
Dell Inspiron 3511 မှာတော့ Screen Size 15.6 inches ရှိပြီး i3-1115G4 Processor ကို အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တာကြောင့် ရုံးသုံး/စာစီစာရိုက် စတာတွေ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Memory DDR4 4GB/Storage SSD 256 GB ဖြစ်တာကြောင့် သွက်လက်ပြီး အသုံးပြုရ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dell Inspiron 3515(Athlon-3050U)
Dell Inspiron 3515(Athlon-3050U) မှာတော့ Screen Size 15.6inch ရှိ၍ AMD ‎Athlon 3050U Processor ကို အသုံးပြုပေးထားပြီး DDR4 4GB Memory နဲ့ Storage ပိုင်းမှာတော့ HDD 1TB နဲ့ ရုံးသုံးစာစီစာရိုက်တွေကို အဆင်ပြေပြေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Windows 11 နဲ့ အသုံးပြုထားပြီး3cells Battery နဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Dell HDD SCS 1TB
Dell HDD မှာတော့ HDD 1TB ပါဝင်ပြီး Disk Drive Speed 7,200 Rpm ဖြစ်တာကြောင့် သွက်လက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
hp 711 Original Cartridge
hp 711 Original Cartridge သည် Ink Volume 29 ml ပါဝင်ပြီး ကြာရှည်ခံပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် အရည်အသွေးဖြင့် ရွက်ရေ 850 pages ထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
Artwork UPS Battery(12V-8.5Ah)
Artwork UPS Battery သည်ကြာရှည်အသုံးခံနိုင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Lenovo Ideapad Gaming 315ACH6 (Ryzen 5, 5600H)
Lenovo Ideapad Gaming 315ACH6 သည် processor Ryzen55600H series ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ gamer များအကြိုက်တွေ့စေမည့် led keybard လေးနှင့် မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား ၁၅.၆ လက်မ ရှိသောကြောင့် မျက်နှာပြင်ကြီးကြီးတွင်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ NVIDIA Geforce GTX 1560 4GB ပါဝင်ပြီး 45 Wh Lithium-Polymer ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးခံနိုင်သောပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါသည်။
Xiaomi Nextool3in 1 flashlight
Xiaomi Nextool3in 1 flashlight လေးကတော့ ဓာတ်မီး torchlight အနေနဲ့ handy ဖြစ်တဲ့အရွယ်သေးသေးလေးနဲ့ 500 lumens ထိ လင်းအားနဲ့သုံး့ရပါတယ်။လူဖြတ်သွားရင်လင်းမယ် movement မရှိတာနဲ့ 27 seconds ဆိုရင် ပိတ်သွားမယ်။ အိမ်အဝင်ဝမှာပဲတပ်တပ် ကုတင်နားပဲတပ်တပ် ကိုယ်ဝင်လာတာနဲ့လင်းသွားမယ်ဆိုတော့ စမ်းတဝါးဝါးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ sensor lamp အနေနဲ့မသုံးချင်ဘူး တချိန်လုံးလင်းချင်တယ်ဆိုလဲ ခလုပ်လေးနှိပ်ပြီး mode ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ။ ဒါကတော့ လူဖြတ်ဖြတ် မဖြတ်ဖြတ် အမြဲအလင်းတွေပေးမယ့် Always on mode ပါ။ 2600 mAh ဆိုတော့ phone ကိုအများကြီးတော့ အားသွင်းလိုမရဘူးပေါ့နော်။ emergency အနေနဲ့ပဲရမယ်။ အလင်းအား 500 lumens အပြည့် သုံးရင်တော့ ၄ နာရီလောက်ခံပြီး 100 lumens ပဲဆိုရင် ၉ နာရီ ၊ 20 lumens သုံးရင်တော့ နာရီ ၅၀ အထိ အသုံးခံပါတယ်။ အားသွင်းချိန် ၄ နာရီခန့်ပါ။အားသွင်းတာက torch နဲ့ USB ကြိုးနဲ့ချိတ်ပြီး တိုက်ရိုက်သွင်း့ရသလို housing bracket ထဲထည့်ပြီး bracket ကနေ တဆင့်လဲ အားသွင်းလိုရပါတယ်။torch body ကို Aluminium နဲ့ housing bracket ကိုတော့ ပလပ်စတစ်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။torch က တော့ 1 meter drop test အကျခံနိုင်ပါတယ်။ housing bracket မှာ နံရံနဲ့ကပ့် ကလစ် body လေး ကို 3M double tape , ဒါမှမဟုတ် screw နဲ့ ကပ်ပြီး ချိတ်သုံး့ရသလို သံလိုက်နဲ့ကပ်ပြီးလဲ သုံး့ရပါတယ်။
Remax N98 Foldable Oscillating Water Cooling Fan
Remax N98 fan လေးသည် လိုသလို အတိုအရှည်လေး ပြုလုပ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး လွယ်ကူစွာခေါက်သိမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။7200 mAh battery ပါဝင်သောကြောင့် မီးအားတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြုစရာမလိုဘဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးခံနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
LG 22MK600M-B 21.5inch Monitor
LG 22MK600M-B သည် ၂၁.၅ လက်မ ရှိပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသောပုံရိပ်ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ refresh rate – 65 Hz နဲ့ 5ms response time ရရှိတဲ့ monitor ဖြစ်လို့ ပုံရိပ်တွေဟာ အမြဲတမ်းကြည်လင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။